विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष : ‘कहिलेसम्म मागिरहने पीडितले न्याय ?’ - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
२०७८ मंसिर, ५ आइतवार
काठमाडौँ / नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
बर्दिया मधुवन नगरपालिका ५३ वर्षीय अशोक सोडारीको द्वन्द्वका बेलामा एउटा खुट्टा भाँचिएको छ । अर्को खुट्टा नचल्ने अवस्थामा छ । उनी एउटा बलियो कृत्रिम खुट्टाको प्रतिक्षामा छन् ।
“देब्रे चल्दैन, दाँहिने खुट्टा भाँच्चिएको थियो, कृत्रिम खुट्टा राखेको छु”, द्वन्द्वका बेलामा अपाङ्गता भएका सोडारीले भने, “कृत्रिम खुट्टा भाँचिएर हैरान भयो, मलाई एउटा बलियो कृत्रिम खुट्टा भए पुग्छ ।”
सोडारीलाई तत्काली समयमा नेपाली सेनालाई सुराकी गरेको आरोप तत्कालीन माओवादीले २०५८ मङ्सिर २६ गते राति ११ बजे सुतिरहेका अवस्थामा चारै हातखुट्टा बाँधेर बञ्चरोले हान्दा एउटा खुट्टा नचल्ने र अर्को खुट्टा भाँच्चिएको हो ।
“बिरामी भएर सुतिरहेको मान्छेलाई राति आएर लछारपछार गरी बाहिर निकाले, कसैले चारै हातखुट्टा बाँधे, कसैले आखाँमा पट्टी लगाए”, उनले भावुक हुँदै त्यो दर्दनाक घटना सम्झँदै भने, “भाला, बञ्चरो, बन्दुक लिएर आएका थिए, बुटले छातीमा हाने, मेरा खुट्टाको जोर्नीजोर्नीमा हानेर म-यो भनेर नालामा फालिदिए ।”
रातिको ३÷४ बजे ‘आमा’ भनेर उनले बोलेको आवाज सुनेपछि उनकी पत्नीले घरमा ल्याएर उपचार गर्न अस्पताल लगिन् ।
तर उनको एउटा खुट्टा काटेर फाँलियो । अर्को खुट्टा चलेन । “द्वन्द्वकै पीडाले बुबा र श्रीमतीको निधन भयो”, उनले आफ्नो दर्द सुनाउँदै भने, “एक छोरी, दुइ छोराको सहारामा बसेको छु, द्वन्द्वको घाइतेका रुपमा अहिलेसम्म केही पाएको छैन ।” सोडारीले अपाङ्ग परिचयपत्र त पाएका छैनन् तर त्यसबापत निःशुल्क उपचार पाएका छैनन् ।
बाग्लुङ जैगुनीनी नगरपालिका-१० का विमल केसीको २०५८ मङ्सिर १२ गते १३ वर्षीय छोरा गणेश केसी बेपत्ता भएको आजसम्म फेला परेको छैन । माओवादीमा लागेको आरोपमा नेपाली सेनाले लिएर गएको यति वर्ष बितिसक्दा पनि छोराको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
“छोरा बेपत्ता भएको २० वर्ष भइसक्यो, न जिउँदो छ, न म¥यो थाहा छैन”, केसीले भावुक भएर भने, “द्वन्द्वमा धेरैको त्यस्तै भयो मेरो मात्र होइन तर छोराको कि सास कि लास चाहियो ।”
केसीलाई निर्दोष नाबालकको के गल्ती थियो र बेपत्ता पारियो भन्ने प्रश्न मात्र दिमागमा आउँछ । नेपाली सेनाले लगेपछि तीन/चार महिनासम्म पोखरामा छ भन्ने आफन्तबाट उनलाई जानकारी आएको थियो । त्यसपछि छोरा कहाँ लगियो थाहा छैन ।
“मेरा आफन्तले बेपत्ता भएको तीन/चार महिनासम्म त पोखरामा नेपाली सेनासँग भेटेका थियो भनेका थिए, ठीक छ छोरा भन्ने लागेको थियो”, केसीले आफ्नो बेपत्ता छोरा सम्झँदै भने, “त्यसपछिका यतिका वर्ष बिते, केही पत्ता छैन ।” द्वन्द्वमा केही अङ्गभङ्ग भएर कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । कोही बेपत्ता आफन्तको पर्खाइमा छन् ।
व्यास नगरपालिका–११ तनहुँ घाँसी कुवाकी सीता कैनी २४ वर्षको उमेरमा एकल महिला भइन् ।
सीताका श्रीमान् भरत कैनीलाई माओवादी कमाण्डरको आरोपमा नेपाली सेनाले हत्या गर्दा साढे दुई वर्ष र साढे तीन वर्षका दुई छोरी थिए । परिवार पाल्ने श्रीमान्को हत्यापछि जीवनमा सीताले भोगेको पीडा र दुःखको बयान गरिसक्नु छैन ।
“श्रीमान्लाई सेनाले घरभन्दा आठ किलोमिटर पर लगेर मारिदिए, हारगुहार गरेर लास बल्लबल्ल पाएँ”, द्वन्द्वका बेला पति बियोगमा परेकी सीताले भनिन्, “कमाउने श्रीमान् मारिए, कलिला दुई छोरी काखमा थिए, मैले के खाएँ ? के लाएँ ? जीवनमा कति दुःखकष्ट भोग्नुप-यो भनिसाध्य छैन ।”
सीताका पतिलाई २०५९ वैशाख १६ गते बेलुका ९ः३० बजे नेपाली सेनाले लिएर गएका थिए । पछि मारिएको अबर आयो । दुई छोरीलाई सीताले पढाउन सकिनन् । दुई छोरी अहिले विवाह गरेर घरमा छन् । सीता घरमा एक्लै बस्छिन्। अहिले पनि उहाँको प्रश्न यही छ मेरा पतिलाई विनाकारण किन मारियो ?
द्वन्द्वपीडितको आवाज उठाउँदै हिँड्ने सुमन अधिकारी आफैँ पनि द्वन्द्वपीडित छन् । आफ्नो पीडासँगै अरु सबै पीडितको न्यायका लागि भौतारिरहनुभएको छ ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीको बुबा तथा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक थिए । उनका बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ माघ ३ गते रुखमा बाँधी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो ।
“कानूनी राज्य हो भने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, राज्यले न्याय दिनुपर्छ, न्याय पाउनु पीडितको अधिकार हो”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने,“ पीडितले पनि यो देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु त प-यो नि ।”
दुवै आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका पहिला विस्तृत नीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र तत्काल र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
“कतिपय पीडित उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्, सरकारले त्यस्तालाई उपचार खर्च दिनुप¥यो, शिक्षा र रोजगारी भए पीडितलाई अरु केही चाहिँदैन ।”
जतिसक्दो छिटो दुवै आयोगका ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिने काममा सरकार र आयोग दुवै लाग्नुपर्ने उनको माग छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ?
शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग-यो ।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने ।
आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले थपे, “पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।”
उनका अनुसार आयोगले विस्तृत अनुसन्धानको काम सुरु गरिसकेको छ । विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्ने उजुरीका पीडितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरण सिफारिस गर्ने काम गरिरहेको छ ।
“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले पीडित पहिचान गरी द्रुतरुपमा परिचयपत्र दिने काम गरिरहेका छौँ”, आयोगमा अध्यक्ष युवराज सुवेदीले भने, “हालसम्म ५०० परिवारका एक हजार ५०० पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छौँ ।”
आयोगले परिचयपत्र बहाकले केके सुविधा पाउने भन्ने विषयमा पनि नेपाल सरकारलाई लेखेर पठाइसकेको छ । पीडितलाई परिचयपत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुविधान विषय छन् । तर त्यो संसद्मा विचारधीन अवस्थामा छ ।
आयोगले सीमित स्रोत र साधनमा काम गरिरहेका छन् । तर आयोगलाई आवश्यक पर्ने कानून राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितको रायअनुसार दुवै आयोगको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ तर अहिलेसम्म संशोधन गर्नेतर्फ दल र सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सङ्क्रमणकालीन न्याय वर्तमान गठबन्धनको सरकार प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
“गठबन्धनको सरकार बनेको छ, यसको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको विषय छ, विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने नै हो”, मन्त्री बडुले भने, “पीडितलाई न्याय दिन ढिला भइसकेको छ, धेरै ढिला गर्नु हुँदैन, दलको सहमति र पीडितको सरोकारलाई ध्यान राखी सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानूनी राज्य, मानव अधिकार प्रतिबद्धताअनुसार टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”
पीडितलाई न्यायमा ढिलाइ गर्दा झन् जटिलता हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “दलको सहमतिमा आवश्यक कानूनलाई पूर्णता दिन्छौँ, विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण गरी पीडक र पीडित छुट्याउनुपर्छ र मुलुकमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
# शान्ति सम्झौता
ढाकाको कपडाप्रति आकर्षण बढ्दै, हेर्नुस् फोटोफिचर
तिहारलाई कोसेली ‘पाल्पाली ढाका’
कोप–२६ : जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरु सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण अवसर
कार्तिकमा बाढी/ पहिरोको वितण्डा किन ? जलवायु परिवर्तन वा अन्य घटना !, मौसम विज्ञको यस्तो धारणा